Reysul wasaaraha Soomaaliya oo gaaray Cadaado. - Wargeyska Faafiye
Reysul wasaaraha Soomaaliya oo gaaray Cadaado.
Reysul wasaraaha xukuumada federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa maanta gaaray magaalada Cadaado ee xarunta xarunta maamul goboleedka Galmudug.
Reysul wasaaraha ooy wehliyaan wasiirka arrimaha guddaha, wasiiru dowlaha madaxtooyada, taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dowlada ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado ku soo dhoweeyay madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guleed, masuuliyiin ka tirsan Galmudug iyo qeybaha bulshada.
Booqashada reysul wasaaraha ayaa la xiriirta xalin u helida colaada u dhaxeysa maamulada Puntland iyo Galmudug oo ku dagaalamay magaalada Gaalkacyo.
Reysul wasaaraha ayaa la filayaa in uu kulamo la yeesho madaxweynaha Galmudug iyo waxgaradka deegaanka kuwaasoo uu kala hadli doono xalinta colaada ka aloosan Gaalkacyo.
Sidoo kale reysul wasaraha iyo wafdigiisa ayaa lagu wadaa in ay gaaraan magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo, halkaas oo ay kula kulmi doonaan madaxda Puntland iyo odayaasha dhaqanka si xal loogu helo colaada Gaalkacyo.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsDowladda: Laga ma hari doono dilka taliyaha.Political infighting threatens Somalia's government.Xasan Daahir Aweys oo Ogolaaday in uu isaga Baxo Cadaado.African Union peacekeeping force gets troop boostIs-Casil: Akhri 14 Qodob Oo Baarlamanku Eeddeeyey Madaxweyne Xasan Sheikh.